Scoutsee: Monetize Social Media na Mgbakwunye Storefront | Martech Zone
Onyeoma is ngwaọrụ mkpanaka nke na-enye onye ọ bụla ohere ịme ego site na ịkwalite ngwaahịa ha hụrụ n'anya ma jiri kwa ụbọchị na Instagram, Facebook na Twitter. Usoro dị n'azụ ikpo okwu dị mma. Mee ụlọ ahịa gị na Scoutsee, tinye ngwaahịa gị, wee tinye ngwa mkpanaka ahụ maka ịmekọrịta mmelite na ngwaahịa ndị ahụ nwere URL dị mkpụmkpụ na ngwaahịa dị na ụlọ ahịa gị Ọ bụrụ na azụrụ ngwaahịa site na post, onye ọrụ Scoutsee na-anata ọrụ site na ire ere ahụ, ihe dị ka pasent isii na iri nke ego nzụta.
Ebumnuche ndị na - elekọta mmadụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya netwọkụ impencer na ndi ozo nke ozo na ahia ahia maka ikwalite ngwa ahia. Scoutsee na-enyere ọtụtụ nde ndị ọrụ aka na Instagram iji kwado azụmahịa ha, n'otu n'otu ma ọ bụ ozugbo na ụdị. Na Instagram, enwere ndị ọrụ karịrị nde isii nwere ihe karịrị ndị na-eso ụzọ 10,000. Tom Kwon, ngalaba-nchoputa na CEO nke Scoutsee.
Atụmatụ Scoutsee gụnyere:
Shoppable Instagram - Gaa n'ihu ịkekọrịta ihe ị hụrụ n'anya na Instagram ma họrọ ihe ịchọrọ ịme ahịa. Eserese ngwaahịa na posts na draịva nke Instagram Na-eso ụzọ ụlọ ahịa nke onye ọrụ Scoutsee nke ngwaahịa echekwara, nke ọ bụla nwere njikọ kpọmkwem ịzụta. Mgbe ịzụrụ ihe, a na-ebufe ọrụ a na PayPal ma ọ bụ akaụntụ akụ nke Scoutsee.
Nchekwa Onwe - Jiri nlezianya dozie ma kwalite ngwaahịa ndị ị hụrụ n'anya ma jiri kwa ụbọchị.
Nde Ngwaahịa - Họrọ ngwaahịa site na ọtụtụ puku ụdị ma jikọọ na ntanetị gị. Katalọgụ ngwaahịa Scoutsee nwere ihe karịrị ụdị 8,000, gụnyere Amazon.com, Rakuten na EBay, yana ọtụtụ narị nde ngwaahịa gafee ngalaba niile.
Real oge Dashboard - Lelee ma nyochaa posts gị shoppable na otu ụlọ ahịa gị na-arụ
Budata Scoutsee App!
Onyeoma soro ndi oru na ulo oru na aru oru iji nye ndi mmadu aka Ndị Scoutsees ma na-enye dashboards maka nsuso arụmọrụ.
A nwalere Scoutsee beta ma na -achọ ibido mmekorita ya na Spartan Race, ụlọ ọrụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-eduga ụwa. Ọsọ Spartan gosipụtara obodo ya nwere oke mmetụta, onye kwalitere ihe omume na ngwaahịa si ebi ndụ site na ụlọ ahịa nwere ikike nke Scoutsee nwere na Instagram ka ha soro. Pịa site na ọnụego hụrụ mmụba ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ntụgharị dị oke karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ.
Tags: Mgbakwunye dashboardMgbakwunye marketingMgbakwunye netwọkMgbakwunye ụlọ ahịaamazonebayahịa ahịainstagramịzụ ahịa instagramrakutenscoutseeụlọ ahịa instagramMgbakwunye mgbasa ozi mgbasa ozitom kwon
Aug 16, 2016 na 7:07 PM
Douglas, nke a dị ezigbo mma! Enwetụbeghị nke a tupu oge a, mana m ga-eleba anya na ya. Daalụ maka ịkekọrịta!